Cadho Ayuu Garoonka Kaga Baxay, AFAR Gool Ayuu Dhaliyey Kaddina Wuxuu Magacaabay MUCJISADA Kubadda Cagta Ee Waqtigan Oo Ah Wiil 16 Jir Ah - Gool24.Net
Cadho Ayuu Garoonka Kaga Baxay, AFAR Gool Ayuu Dhaliyey Kaddina Wuxuu Magacaabay MUCJISADA Kubadda Cagta Ee Waqtigan Oo Ah Wiil 16 Jir Ah
Erling Haaland ayaa sii wata goolashiisa layaabka leh, waxaanu kulankii xalay ay kooxdiisu 5-2 ku garaacday Hertha Berlin uu ka dhaliyey afar gool oo daran doorri ah oo uu kusii dheeraystay rikoodhkiisa goolasha uu dunida kaga yaabsanayo.
Weeraryahanka reer Norway oo kusoo bilowday ciyaarta ayay u suurtogashay inuu afarlay dhaliyo, laakiin waxa uu qiray inuu ka cadhooday beddelka lagu sameeyey iyadoo aanay ciyaartu dhamaanin.
Markii ay ciyaartu dhamaatay ayuu xaqiijiyey inuu cadho garoonka kaga baxay oo aanu ku qanacsanayn in tababare Favre uu beddelo maadaama uu afarlay dhaliyey fursadna u haystay inuu sii badsado tirada goolasha kulanka, laakiin waxa uu haddana dunida u muujiyey inuu jiro ciyaartoy 16 jir ah oo ah kan ugu maskaxda badan da’yarta kubadda cagta ciyaarta.
Haaland waxa uu sheegay in Youssoufa Moukoko uu yahay mucjisada kubadda cagta ee waqtigan isagoo ku sifeeyey ‘da’yarka ugu maskaxda iyo hibada badan ee dunida joogta waqtigan’.
Moukoko oo Jimcihii u dabbaal-degay sannad-guurada dhalashiisa ee 16 jirka uu ku noqday, waxa uu garoonka soo galay daqiiqaddii 85aad ee ciyaartii ay Hertha Berlin ku karbaasheen, waxaanu horeba u noqday laacibkii ugu da’da yaraa ee horyaalka Bundesliga ka ciyaara.
Haaland oo lagu beddelay Moukoko ayaa waxa uu sheegay in wiilkani uu yahay mucjiso dunida kusoo socota, waxaanu yidhi: “Waa ciyaartoyga ugu maskaxda badan dunida waqtigan. Maalin ka hor ayuu 16 jir noqday, taasina waa layaab. Wuxuu leeyahay mustaqbal wanaagsan oo sugaya.”
Erling Haaland ayaa la weydiiyey haddii uu isagu isbarbar-dhigo hibada Moukoko, waxaanu ku jawaabay: “Anigu 20 jir ayaan sare u dhaafayaa, markaa waan sii gaboobayaa hadda, sidaas ayay wax yihiin.”
Moukoko oo u dhashay waddanka Jarmalka ayaa hore ugu ciyaaray xulka qaranka Germany ee U20 isagoo waliba 15 jir ah, taas oo iyaduna layaab lahayd. Waxa kale oo uu Borussia Dortmund uga ciyaaray kooxdeeda U17 iyadoo ay waqtigaas da’diisu ahayd 12 jir.